चितवनमा साथीले लिए आफ्नै साथीको ज्यान ! – Kavrepati
Home / समाचार / चितवनमा साथीले लिए आफ्नै साथीको ज्यान !
admin September 18, 2021	समाचार Leaveacomment 84 Views
चितवनको राप्ती नगपालिका ९ मा एक व्यक्तिले छिमेकीको ह’ ‘त्या गरेका छन्। राप्ती ९ शीतल टोलका ५९ वर्षीय कान्छा लामाको ह’ ‘त्या भएको हो।
कान्छाको ह’ ‘त्यामा सं’ग’ल्न भएको आ’रोपमा छिमेकी दशरथ ठकुरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार शुक्रबार राति सँगै बसेर खानपिन गर्दा उनीहरुबीच वि’वा’द भएको थियो सोही क्रममा दशरथले लामालाई घ’नले प्र ‘हा’र ग’रेका हुन्।
घटनास्थलबाट शवसँगै ह’ ‘त्या आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरी र स्थानीय बीच झ’ड’प’समेत भएको थियो । स्थानीले पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि आ ‘क्र’म’ण ग’र्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्दा झ’ड’प भएको हो।
प्रहरीले ह’वाई फा’य’र गरेपछि स्थानीय ति’त’रभि’तर भएका थिए। त्यसक्रममा प्रहरी निरीक्षकसहित पाँच जना प्रहरी घाइते भएका छन्। उनीहरूको उपचार भैरहेको छ दुई जना स्थानीय व्यक्ति घाइते भएका छन् । मृतकको शवलाई भरतपुर अस्पताल राखिएको छ ।
अन्य समाचार : नेपाली बलरको कमजोर प्रस्तुतीले अमेरिकासंग नेपाल ६ विकेटले पराजित काठमाडौ । आइसीसी विश्वकप लिग २ अन्तर्गत शुक्रवारको खेलमा अमेरिकासँग नेपाल ६ विकेटले पराजित भएको छ । सुरुमा दवाव दिएको नेपालको बलरको प्रस्तुती कमजोर देखियो ।
नेपालले दिएको १७५ रनको लक्ष्य अमेरिकाले २९।३ ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै पूरा गर्‍यो । यो लक्ष्य अमेरिकाको लागि निकै थोरै हो ।
उसका लागि ओपनिङ ब्याटसम्यान स्टिभन टेलरले सर्वाधिक ९२ रन बनाए । ६३ बल खेलेका उनले १२ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे । यस्तै जसकरण मल्होत्रा र मोनांक पटेलले नटआउट रहँदै क्रमशस् ३६ र ३८ रन बनाए । मोनांकले यसअघि सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालविरुद्ध शतक बनाएका थिए ।
यी तीन बाहेक अन्यले खासै रन बनाउन सकेनन् । तर नेपालले थोरै रनको लक्ष्य दिएकाले अमेरिकालाई खेल जित्न सहज भयो । यसअघि दोस्रो इनिङमा नेपालले दुई पटक राम्रो अवसर बनाएको थियो । खेलको पाँचौ ओभरमा सन्दीप लामिछानेले २ विकेट लिएसँगै नेपालले खेलमा फर्किने संकेत गरेको थियो । तर स्टिभन टेलरको ब्याटिङ अगाडि नेपाली बलिङ फितलो साबित भयो ।
यस्तै इनिङको २० ‍औं ओभरमा करन केसीले २ बलमा २ विकेट लिएपछि पनि नेपाल खेलमा चुनौती प्रस्तुत गर्न सफल भयो । तर मोनांक र जसकरणले नेपाललाई खेलमा पकड जमाउन दिएनन् ।
यसअघि पहिलो इनिङमा नेपाल १७४ रन बनाएर अलआउट भएको थियो । टस हारेको नेपालले ४८ ओभर खेल्दै सबै विकेट गुमाएको हो । टोलीको लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतक प्रहार गरे। यसअघि अमेरिका र ओमानविरुद्ध पनि राम्रो सुरुआत गरेका ज्ञानेन्द्रले ठूलो इनिङ खेल्न सकेका थिएनन् । तर आज भने अमेरिकाविरुद्ध टोली संकटमा परेका बेला उनले संयमित खेल प्रदर्शन गरेका हुन् । उनले ५५ रन बनाउने क्रममा १०५ बल खेले । उनले ३ चौका प्रहार गरे ।
आजकै खेलमा डेब्यू गरेका गुलशन झाले ज्ञानेन्द्रलाई बलियो साथ दिए । आउट हुनुअघि ५३ बल खेल्दै १ छक्का र २ चौका प्रहार गरेका उनले २८ रन बनाए । ज्ञानेन्द्र र गुलशनले ५१ रनको साझेदारी गरे । यही साझेदारीको बलमा नेपालले सम्मानजनक योगफल बनाएको हो ।
Next क्रिकेट रंगशाला बनाउँदा १६ करोड ऋण लागेपछि धुर्मुस सुन्तलीले झिके हात, अब कसले तिर्छ पैसा ?